Tadawurku waa xaqiiqo cilmiya – Kaasho Maanka
Tadawurku waa xaqiiqo cilmiya
W/Q: Samawade Seeraar
Waxaad arkaysaa dad si fudud u yasaya aragtidii Daarwiin ee Tadawurka. Waxa qurux badan qofku markuu wax durayo inuu aqoon u lahaado. Iyadoon meel fog laga eegin cadaymaha Tadawurka, adiga akhristaha ah ayaa tusaale nool u ah. Haddaad u fiirsato jidhkaaga waxa laga helayaa xubno aanad u baahnayn oo aan faa’ido buuran kuu lahayn laakin awoowyaashii aad ka soo tafiirantay muhiim u ahaa.
Vestigial organs (Xubanaha jidhkeena aan faa’idada lahayn)
Dhudhumada iyo baabacadu meesha ay iska galaan u fiirso adoo suulka iyo far-yarada is taabsiinaya waxa laga yaabaa inaad aragto muruq yar oo la yidhaa (palmaris longus). Muruqan dadka qaarkii malahan wax dhibaato ah oo ay kala kulmeena ma jirto. Muruqani noolaha aynu asal-wadaagta nahay sida daayeerka oo kale aad buu muhiim ugu yahay, waayo waxay si aasaasiya u adeegsadaan gacmaha, iyagoo ku soconaya ama dhirta ku fuulaya.
Jidhkeenu wuxuu leeyahay timo gaagaaban (xaad). Marka aad dareento qabow, muruqyo aad u yaryar oo maqaarka hoostiisa ku jira ayaa kor u taaga timahaa. Xaaladaa waxaynu u naqaana “Jidhidhico – Goosebumps – “. Noolaha aynu asal-wadaagta nahay sida shimbiraha iyo xayawanada dhulka qaboobaha ku nooli timahaa duleed noloshooda qayb muhiim ayay ka qaataan, iyagoo dhaxantana ka celiya kulka jidhkana u xajinaya.
Dhagtaada waxa ku xeeran saddex muruq oo aan faa’ido kuu lahayn. Ka hor intuuna Tadawurka heerkan soo gaarin, muruqyadaasi waxay dhaq-dhaqaajin jiren dhagaha iyagoo la doonanaya goobta jabaqdu ka imanayso – dabcan dhagahu intan waa ka waynaayen – . Noolaha in badanoo ka mid ah muruqyadaasi badbaadooda ayay ka qayb qaataan, waxayna awood u leeyihin inay dhagahooda dhan walba u jeediyaan.
Ujeedada aan uga socdaa waxay tahay, Waxa jirtay xilli xubnahaasi muhiim inoo ahaayeen. Laakiin tadawur inagu dhacay awgii ayay la hawl gabeen.
Cadaymo kale +
Nibirigu wuxu ka mid yahay naaslayda ku nool badaha, haddii aynu u fiirsano Gacmaha uu ku dabaasho sida ka muuqata sawirka waxay u dhawyihiin kuweena oo kale, waxay ka kooban yihiin faro, dhudhumo iyo gacan dambeed. Saynis-yahanada faqa noolaha dhulka hoos maray (paleontologists) waxay heleen lafo – Fossils – markii la isku habeeyey qaab ahaan aad ugu dhaw kuwa nibiriga. Taas waxay cadayn u tahay noolaha barriga ku nooli inuu asal ahaan kasoo jeedo biyaha.
DNA-du waxay cadaynaysaa dhaamaan nooluhu inay qaraabo wax wadaagta yihiin. Saynisku wuxu inoo suurta galiyay inaan is bar-bar dhigi karno Qaabka ay u habaysantahay DNA-da noolayaashu, halkaa waxan kala soo dhex bixi karnaa intee in le’eg ayay isku jiraan noolayaashu. (How related they are). Tusaale: 99% daayeerka chimpanzee la dhaho DNA diisa waxa la barbar dhigi karaa ta dadka.
Dareemaha loo yaqaano – Left recurrent laryngeal nerve – ee kasoo farcama dareemaha 10aad ee maskaxda “Vagus”, wuxu aadaa cunaha. Waxad ogtahay maskaxda iyo cuneheenu inay isku dhaw yihiin, Markaa waxay ahayd inaanu marin masaafo dheer ee uu si toos ah cunaha u aado.
Hadaba toos ma u aadaa?
Marka uu kasoo baxo maskaxda wuxu hoos ugu dhaadhacaa wadnaha isagoo hoosta ka maraya halbowlaha, markaasuu kor u laabta oo uu cunihii ku noqdaa. Waxa laga yaabaa inaad is waydiiso muxuu masaafada intaa le’eg u soo maray. Saynis yahanka reer ingiriis Richard dawkins ayaa wuxuu yidhi mar uu masaladan ka hadlaayay “waa khalad aanu injineer ku dhici Karin”. Arrintan dhadhan ma samaynayso haddii aan ku dabaqno aragtida ah Ilaahbaa sameeyey noolaha. Laakiin hadaan u eegno tadawurka macno balaadhan ayay samaynaysaa.
Asal-ahaan waxaan ka soo jeednaa biyaha, xayawaanada biyaha ku nooli ma lahan qoor, dareemahaasi marka uu maskaxda ka yimaado wuxu sii ag maraa wadnaha si uu cunaha u tago. Marxalada badda marka laga soo gudbo ee noolihii isu badalo barri ku nool, dareemihii dhararkiisii waa dheeraanayaa laakin wadadii u marayay is badali mayso.
Gunaanadkii nooluhu waa taarikh socota, qaabka aynu u samysanahay ayaa tadawurka u markhaati furaya. Cadaymo aan tiro lahayn ayaa ku xardhan dhammaan qaybaha biology-ga iyo sayniska la xidhiidha noolaha.
10 Bilood Kahor
this is ma fav web
Reply to waaqaa ween
Last edited 10 Bilood Kahor by Kaasho Maanka
6 Bilood Kahor
Ninka seyniska aamino walee duli ayu ku sugan yahay maxa yeelay seyniska sidiisaba 100/% runta ma sheego wuuna is badbadalaa xubnaha aad lee dahay muhim nooma ahan bari seynisku wuxu ogaan dona iney muhim inuu tahay teeda kale nerviska aad sheegeyso Ee cunaha marayo Ee wadadaas dheer maraayo xikmad aya ka danbeyso sida gaalka rabo haddii uu noqon lahaa waxa laga yabaa inu errores badan jiri laha jirka bini adamka hhhhhh haddu alle wax ka sheegay abuurkiisa bal asaga hahdu ingineer fiican yahay ha far sameysto cunahiisa ileen waa qabiire hhhhhh nacas aya waxas laga dhadhicin karaa caasi waalideen waan… Akhri faalladan »
5 Bilood Kahor
Reply to Cabdullahi iimaan
Kawnku ma yahay mid nidaamsan?
W/Q: Cumar Cali
Inkastoo aan la odhan karin kawnku waa mid 100% nidaamsan oo nidaam darro iyo isku dhex yaacsanaani ay kawnka qaybo ka mid ah ka muuqato, hadana nidaamsanaanta kawnka waxaa aynu u tirin karnaa jiritaanka afar waxyaabood, maatar/matter, tamar/energy, fagaag/space iyo ammin/time. Afartaa shay labo ba waa ay isku mataansan yihiin oo fagaagga iyo amminta waxaa la isigu geeyaa spacetime. Halka...
Waa maxay Hantiwadaag “Socialism”?
Qaybta: Ganacsi, Siyaasadda, Xulka
Inkastoo uusan hanti-wadaagu lahayn micna qeexan oo laysla wada yaqaan ama la isku wada raacsan yahay, hadana micnahiisa guud wuxuu noqon karaa in bulshadu wada yeelato hantida iyo wax soosaarka guud. Sida ilaha wax soosaarka, warshadaha, beeraha iyo khayraatka dabiicigaa. Hanti wadaaggu wuxuu taariikh ahaan soo jiray muddo dheer laga soo bilaabo ilbaxnimadii Giriigga iyo tii Peershiya hayeeshee...
Farsamada Alle: Xamaaratadii dheddigga ahayd
Qaybta: Awood sare, Saynis
Xamaaratadan yar ee uu sawirkeedu hoos ka muuqdo, waxaa loo yaqaan desert grassland whiptail lizard, waxaana aad looga helaa meelaha lama-degaanka ah (desert) iyo lama-degaan-lamoodka (semi-desert). Waxa cajiibka ka ah noolahan yari waa in dhamaantiis yahay dheddig oo keli ah oo aanan lahayn wax lab ah. Waxa ay u tarmaan hab gooni ah oo loo yaqaano parthenogenesis, habkani uma baahna in ukunta...
W/Q: Saacid Kaahiye
Qaybta: Sooyaal, Xulka
Taariikhyahankii Giriigga ee loo yaqaanay Herodotus, kuna magac dheeraa, "Aabaha taariikhda" ayaa buugiisii loo yaqaanay 'The Histories' (Taariikhaha) wuxuu inoogu soo wariyay dad uu ugu yeedhay "The Macrobians." Dadkaa, sida uu Herodotus inuu sheegay, waxa ay ku noolaayeen adduunka dacalkiisa koonfureed meesha uu ku dhamaado, sida ay Giriigu aaminsanaayeen oo ay aqoontoodu dhanayd, oo ku beegan...
Adiga yaa ku abuuray? Kownka se yaa abuuray?
Qaybta: Awood sare, Falsafad, Saynis
Sababta keentay in dadku meel kasta oo ay joogaanba samaystaan sheeko xariireed abuurka ku saabsana sida uu falkiyay David Hume dadku kama fikiri karaan shay bilaa sababa, waana ujeedada ay nolosha iyo kawnka ahaanshahooda fasirka ugu raadshaan, hadday waayana ay mid jeebkooda ah u saaraan.
Akhri Qormadan18 Faallo
Caqliyadda Soomaalida iyo cidhib xumada aqooneed
W/Q: Ismail Baashi
Aadanuhu waxa uu kaga duwan yahay noolaha kale caqliga iyo garashada oo u suura galisa fahanka nolosha iyo koonkaba walowba ay jiraan doodo falsafadeed oo si qoto dheer usii lafa gura waxa uu ka dhigan yahay caqli iyo garasho balse waxa si guud la isuga raacsan yahay in labaduba ay ku sar go'an yihiin deegaanka iyo waqtiga markaa ay la nool yihiin.
W/Q: Samawade Seeraar 12th September 2020
Kulligeen waxaan nahay diin-laawayaal !!
Alle-diidka Soomaalida ee la kulma hanjabaadaha dilka ah